शिक्षामा सिकाइ : एक शब्द चित्र | EduKhabar
शिक्षामा सिकाइ : एक शब्द चित्र
५ महिना अघि एडुखबरमै सिङ्गापुरको सिकाइ यात्रा लेखेको थिएँ । त्यो यात्रा व्यवहारिक प्रयोजनमा जाँदा शैक्षिक पक्षमा आफ्नो रुचीको खोज थियो ।
पढ्नुहोस् उक्त आलेख : एक सिकाइ यात्रा
यस पटकको भ्रमण मूलतः शैक्षिक प्रयोजनका लागि नै गरिएको थियो । काठमाडौंबाट दिल्ली हुँदै भारतीय राज्य तेलाङ्गनाको हैदराबाद हवाइ जहाजमा गएर, कनटिक राज्यको यादगिर र हस्पेट जस्ता शहर हुँदै गाडीमा बेङ्गालुरु पुगी फेरि हवाइजहाजमा दिल्ली हुँदै काठमाडौं फर्किएको हो । यो यात्राका क्रममा खास गरी अजिम प्रेमजी फाउण्डेशनले सुधारमा सहयोग गरेका सरकारी विद्यालय र तिनीहरुको संयन्त्रको अध्ययन अवलोकन गरियो ।
यात्राको विस्तृत विवरण उचित ढाँचामा पछि प्रस्तुत गरिने छ । यहाँ त्यो यात्रामा अनुभव गरिएका मुलभूत गैर प्राविधिक पक्षहरु सम्बन्धित अवलोकनहरू प्रस्तुत गरिएको छ ता कि ती आफ्ना मानसपटलबाट नै नहराउन् !
कतै जाँदा पहिलो ठोक्किने विषय स्वाभाविक रुपमा भाषा हो । यी सबै विद्यालयको माध्यम भाषा कन्नड थियो । यात्राका सहभागी भारतको कर्मचारीतन्त्रबाट निवृत्त भएका र विशेष गरी त्यहाँको एकलव्य संस्थाका संस्थापक मध्येका एक शरद बेहार थिए । उनले राम्रो निरीक्षकको काम गर्थे । केटाकेटीमा विज्ञान र गणितको विषयगत ज्ञान राम्रो अनुभव गरियो । उनीहरुको कन्नड भाषाको ज्ञान पनि राम्रो थियो । यस प्रसङ्गमा दुइ वटा सन्दर्भको याद आयो :
पहिलो, भारतका पूर्वराष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामले आफ्नो गणित विज्ञानको ज्ञान उच्च हुनुमा विद्यालयमा आफूले आफ्नो मातृभाषा तमिल माध्यममा अध्ययन गरेको एक कारण रहेको बताएका थिए । उनले विभिन्न सन्दर्भमा यसको उल्लेख गरेका छन् । ती विद्यालयका विद्यार्थीको गणित र विज्ञानको उच्च ज्ञानको कारण मातृभाषामा अध्ययन नै देखियो ।
अर्को प्रसङ्ग, नेपालको चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा. अर्जुन कार्कीको थियो । उनी, हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्ने हो भने पुर्खा वीर थिए भनेर पुग्दैन, अब हाम्रो ज्ञानको स्तर हाम्रा छिमेकीको भन्दा अब्बल हुनु प¥यो भन्छन् । कन्नड भाषा र गणित बलियो रहेका ती कन्नड विद्यार्थी हेर्दा त्यो कुरा याद आयो । नेपाली केटाकेटीहरुको ज्ञान तती कन्नड बालबालिका कै जस्तो हुनुपर्यो नि ! नत्र अन्ध राष्ट्रवादले मात्र कति टाढा पुर्याउला ?
प्राथमिक विद्यालयको कुरा गर्दा मातृभाषा त छँदैछ उनीहरु पर्याप्त रुपमा एकीकृत सिकाइको प्रक्रियामा गइसकेका रहेछन् । उनीहरुलाई ए फर एप्पल जस्ता कुरा पढाइएको थिएन तर उनीहरुको परिवेशको ज्ञान औपचारिक बनाइ सकिएको थियो ।
यी मसिना केटाकेटीहरु आफू वरिपरिका बालीनालीको नाम र प्रयोग राम्ररी जान्दथे । धेरै केटाकेटीले भने उनीहरुको घरमा पनि करेसाबारी छ । यद्यपि यो कुरा चाहिँ भन्नु पर्छ कि उनीहरुको दिवा खानामा तरकारी थिएन । दाल र तिहुन (अन्ना साम्बर) अनि महि र अण्डा चाहिँ थियो । शायद व्यवस्थापकीय हिसाबले यसो गरिएको होला ।
पूर्व प्राथमिक कक्षाका बारेमा बेहारजीको स्पष्ट धारणा थियो : यति बेला प्रत्यक्ष सिकाएर सिक्ने होइन । सिकाइ अप्रत्यक्ष रुपमा केटाकेटीले आर्जन गर्ने हुनुपर्छ ।
एकदम खट्किने कुरा चाहिँ शिक्षकको स्थिरता र स्पष्टता हो । वेतनको कुरा पनि छ तर त्यहाँ छनौट प्रक्रिया निकै कडा छ र कमसेकम विषयगत रुपमा अयोग्य शिक्षक आइपुग्दैनन् । सरकारी विद्यालयमा ठूलो मात्रामा शिक्षक अनुपस्थित रहने अवस्था नरहेको एक अध्ययनले देखायो । एक अन्तरक्रियामा फाउण्डेशनले काम नगरेका केही विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकहरुको रवैया भने अल्छी लाग्दै थियो । तर जे भने पनि भारतमा नेपालमा जस्तो यत्तिकै कामका लागि जनशक्ति पलायनको उति असर छैन । जनशक्तिको भण्डार ठूलो छ । त्यस अर्थमा हाम्रो देशमा शिक्षक स्तरीय राख्न थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्को विषय विद्यालयको खाना हो । त्यहाँ राज्य धनी छ । पैसा खर्चन सक्छ तर बन्दोबस्तको कुरा पनि हो । हाम्रो देशमा शिक्षक नै विद्यालयमा खाजा खाँदैनन् । अनि उनले केटाकेटीको भोक बुझ्न पनि गाह्रै छ ।
ग्राउण्ड मै नभेटिएको तर यसै प्रसङ्गमा आइपरेका दुइ उल्लेखनीय कुरा परे जसमा एउटाले हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षाको आधार नै हल्लाइ दिन्छ । बङ्गालुरुमा दिल्लीका लागि चढेको हवाइ जहाजमा समाचार पढियो : बदमासका २ गोली खाएर पनि एक जना बाबुले छोरीलाई परीक्षा स्थल पुर्याएर मात्र अस्पताल गए ।
यसबाट शिक्षामा बाबु आमाको प्रतिबद्धता एक हिसाबले देख्न सकिन्छ । अर्को हिसाबले यो लगानीको दबाब पनि होला तर नौ कक्षा पढेकी छोरीले आफ्नो परीक्षा भन्दा बाबुको जीवन बहुमूल्य ठान्नु पर्ने होइन र ? यसले हाम्रो शिक्षाको बुझाइ र परीक्षाको आतङ्क स्पष्ट पार्छ । त्यस मानेमा कर्नाटक र नेपालमा शिक्षाको विरासत उस्तै पनि छ । हामी यति असम्वेदनशील नरही शैक्षिक उच्चता हासिल गर्न सक्दैनौ ? त्यो नाथे हामीले निर्माण गरेको परीक्षा पद्धतिको यत्रो आतङ्क ?
अर्को चाहिँ भारतीय पाठय पुस्तकमा नेपालको चित्रण । ( हेर्नुहोस् सबै भन्दा माथिको फोटो ) यो चित्रण धेरै नेपालीहरुले भारत प्रति सोच्ने गरेको स्वचित्रण भन्दा निकै फरक छ : कक्षा ९ को राजनीति शास्त्रको पाठ्यपुस्तकमा नेपालको जन आन्दोलनका बारेमा लेखिएको छ बोलिभिया सँगै । कसैले तिम्रो अनुमति नलिई तिमीलाई हेप्न सक्दैन भन्थे रुजवेल्टले । यो हेरेर यो कुरा कताकता सही नै लाग्यो । नेपालीहरु आफैँ लघुताभाष बोकेका त होइनन् ?
कति बेला फेरि कति नेपालीहरु भारत र नेपालको बूताको तुलना गर्छन् । गर्न योग्य कुरा त हाम्रो क्षमता र असलियत मात्र हो नि, हैन त ?
- भट्टराई सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सकृय शिक्षाकर्मी हुन्, उनी गैह्र सरकारी संस्था 'शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र'सँग आवद्ध छन् ।
प्रकाशित मिति २०७५ चैत्र २० ,बुधबार
अस्थायी तथा करारका शिक्षक र कर्मचारीलाई सजिलो हुने गरी नियम संशोधन
२० प्रतिशत सम्म तलब वृद्धिको प्रस्ताव, करारलाई स्थायी नियुक्ति
शिक्षाका सवालमा अख्तियारको ९ चासो, शिक्षक कर्मचारीको थप भत्ता निषेध गर्न सुझाव
विद्यालय सुधार : 'अपडेट' नभएका प्रधानाध्यापक चुनौती
सात हजार धेरै विद्यालयमा वृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम
शिक्षक सरुवामा भ्रष्टाचार !
पढाईको दवाव : एउटै शैक्षिक संस्थामा ५ बर्षमा ५० विद्यार्थीद्वारा आत्महत्या
शिक्षकका चिन्ता शिक्षकले गर्दा राम्रो हो कि । संघको जुनियर उपसचिवलाई सिनियरले हाकिम (कार्यकारी) मान्न भएसि,..
दुई तिहाईको सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरोस् । ..
सक्दो चाडो नतिजा प्रकाशित भए राम्रो ..
म शिक्षक भएको नाताले म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहान्छु । तपाईले पक्कै पनि अनुभव लिनु भएकै होला कि शिक्षाको..
Education is the best way...
काठमाडौं - भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका १ सय ३१ स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेका ७ हजार १ सय ३१ विद्यालयमा वृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको वृहत विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ का आधारमा तयार सन्दर्भ सामाग्रीहरुको अभिमुखिकरण सहित वितरण गर्ने का.....
परीक्षाको मुखैमा प्रश्न पत्र नै जलाईयो
कानुन भन्दा माथि मेडिकल कलेज र लाचार सरकार
काठमाडौं - मेडिकल कलेजहरुले नियम विपरित लिएको थप शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर गरिएका विद्यार्थी आन्दोलन तथा ती आन्दोलनले सिर्जना गरेका घटनाहरु र मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुका एकपछी अर्काे नियम विपरितका कामहरु उल्लेख गरिएका समाचार नै गत साता भरि मुख्य विषयका रुपमा प्रकाशित भए.....
The above law acts of medical college operators and reluctant government